MySansar – Page 261 – A Nepali blog running since 2005. Seen by many as an antidote to mainstream media
आहा, हाम्रो नेपाल !
Posted on June 24, 2012 by Salokya
माथिको फोटोमा तपाईँले दायाँ छेउको कुनामा जुन दृश्य देखिरहनुभएको छ, त्यो जेम्स क्यामरुन निर्देशित फिल्म अवतारको हो। अन्तरिक्षमा रहेको काल्पनिक पान्डोरा ग्रहको दृश्य। अनि माथिको ठूलो दृश्य चाहिँ हाम्रै नेपालको हो। धुन्चेबाट गोसाइँकुन्ड जाने बाटोमा देखिने दृश्य। यो त अझ क्यामेराले यति मात्रै खिच्न सकेको हो। खोलाको कलकल, चराको आवाज यो फोटोमा देखाउन सकिँदैन। साँच्चै,… Continue reading
सगरमाथा भारतमा रे !
Posted on June 23, 2012 June 23, 2012 by Salokya
सगरमाथा नेपालमा पर्छ भनेर हामी जति गर्व गर्छौँ, चीनमा पर्छ भनी चिनियाँहरु पनि उत्तिकै गर्व गर्छन्। चिनियाहरुका केही लोकप्रिय गीतहरु छन् (राष्ट्रिय गीत जस्तो) जसमा यस्ता शब्दहरु छन् “हाम्रो महान राष्ट्र, जहाँ चोमोलुङमा, विश्वको सर्वोच्च शिखर छ…”आदि इत्यादि। यसबारे माइसंसारमा पहिले नै बहस भइसकेको छ। सगरमाथाको चुचुरो चाहिँ नेपाली भूभागमा पर्छ भन्ने कुरालाई भने चीनले… Continue reading
मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो…
Posted on June 21, 2012 June 22, 2012 by Salokya
काठमाडौँमा मौसमसँगै राजनीति तातिँदै गर्दा केही काम र केही घुमघामका लागि शनिबार उत्तर (लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज) तर्फ लम्केका थियौँ हामी। गएको दिनदेखि नै पानी परेपछि यो पाँच दिनको यात्रामा कति रुझियो, कति पटक चिप्लेटी खाइयो, कति पटक डङ्ग्रङ्गै लडियो, कति जिउभरी हिलो लगाइयो, कति रक्तदान (जुकालाई) गरियो…. तर सब बिर्सिन पुगियो यो दृश्य हेर्दा। सँधै… Continue reading
दुई वर्षको आयु रहेको संविधान सभालाई पटक-पटक म्याद थपेर चार वर्षसम्म तन्काएर पनि संविधानै नबनाई अवसान गराएपछि केही सभासदहरुले लेख लेखेर र केहीले भाषण गरेर माफी मागे। तर अधिकांशले केही गरेनन्। दलहरु पनि एकअर्कालाई दोष दिँदै बसेका छन्। यो राजनीतिक कुरा भयो। यसमा व्यक्तिगत नैतिकताको कुरा पनि आउला। जब तपाईँ केही गल्ती गर्नुहुन्छ, त्यसपछि माफी… Continue reading
प्रचण्ड र भट्टराईले पद छाड्नु पर्छ
Posted on June 19, 2012 June 21, 2012 by परिवर्तन
– परिवर्तन औपचारिक रूपमा माओवादी फुटेको छ। चुनवाङ बैठकदेखि बढ्दै गएको विवाद मात्र होइन जनयुद्ध पछि वैद्य पक्षहरूको भूमिकालाई कमजोर पारिनु, पार्टीले युद्धका वेला लडेका कार्यकर्ताको भावना नबुझ्नु र एकता केन्द्रसँगको एकीकरणपछिको पछिल्लो समयमा आफ्नै पुराना लडाकु र दु:ख पाएका कार्यकर्ताका सट्टा ठेक्का-पट्टा र जग्गा दलाली गर्नेहरूले जिल्ला-जिल्लामा नेकपा (एमाओवादी)को नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भमा वैद्य समूहले… Continue reading
ठाउँ- पशुपति आर्यघाटको बागमती नदी। के गर्दैछ त यो केटा ? बागमती नदीमा माछा मार्दै ? हैन-हैन। कहाँ माछा मार्नु यस्तो पानीमा ! त्यसो भए के गर्दै त ? अनुमान लगाउनुस् र जवाफ हेर्न भित्र आउनुस्।
धुन्चेलाई नजिकबाट हेर्दा
Posted on June 16, 2012 June 21, 2012 by Salokya
अहिले म रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा छु। पहिलो पटक यहाँ आएको हुँ। त्यसैले रमाइलो लागिरहेको छ। अपराह्नतिर यहाँ आइपुगेका थियौँ। आजै यहाँ अञ्चलस्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगिता पनि भइरहेको रहेछ। त्यहीँ खिचेका केही फोटोसहितको यो फोटो ब्लग।
शक्ति प्रदर्शनको नाममा कार्यकर्तालाई सास्ती
Posted on June 15, 2012 June 15, 2012 by Salokya
जेठ-असारको चर्को घाममा कार्यकर्तालाई तताएर सबै पक्षले शक्ति प्रदर्शन गरिसके। अब पुगेन र ? अलि बढी अलि कम मात्रै हो जसले शक्ति प्रदर्शन गरे नि। दुःख पाउने कार्यकर्ता नै हुन्। यसरी सडकमा शक्ति देखाएर पनि कहीँ कुरो मिल्छ ?
बम बने पहिलो ‘न्यायाधीश शहीद’
Posted on June 15, 2012 by Salokya
अज्ञात अपराधीले दुई साताअघि गोली हानी हत्या गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम पहिलो न्यायाधीश शहीद बनेका छन्। सरकारले आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उनलाई शहीद घोषणा गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। अलि पछाडि हेर्ने हो भने शहीद घोषणा गराउन ठूल्ठूला आन्दोलन भएका छन्। तरुण दलका चितवन अध्यक्ष शिव पौडेलको जेलभित्र हत्या भएको भन्दै उनलाई शहीद… Continue reading
अमेरिका भन्दा नेपाल बढी शान्त
Posted on June 14, 2012 June 14, 2012 by Salokya
केही नेपाली, त्यसमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरु नेपाल खत्तमै भो भनी चिन्ता गर्ने गर्छन्। तर नेपाल त्यति खत्तम पनि भइसकेको छैन। नेपाल छिमेकी देश चीन र भारतभन्दा मात्र हैन, शक्ति राष्ट्र अमेरिकाभन्दा पनि शान्त छ। यो तथ्य अमेरिका र अस्ट्रेलियाको संस्था इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिसले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल पिस इन्डेक्स २०१२’ मा खुलेको छ।… Continue reading
Posted on June 13, 2012 June 14, 2012 by Salokya
एसएलसी रिजल्ट निराशाजनक आयो। पोहोरभन्दा झण्डै नौ प्रतिशत कम पास। ४७.१६ प्रतिशत मात्र पास अर्थात् आधाभन्दा बढी फेल। अझ फेल भएर पुनः परीक्षा दिनेहरु त ८६ प्रतिशत फेल भएका छन्। त्यत्रो लगानी छ शिक्षामा। हरे बिजोग ! शिक्षामा राज्यले कूल बजेटको १७ प्रतिशत खर्च गर्छ। गैरसरकारी क्षेत्रको समेत लगानी जोड्नुस् त वार्षिक ६९ अर्ब पुग्छ।… Continue reading